Human Rights Watch Oromoon 140 ajjeefamuu ifa godhe - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Human Rights Watch Oromoon 140 ajjeefamuu ifa godhe
Tankaarfiin mootummaa biyyattii tasgabbii dhabamsiisuu fi gara funduraatti hallayyaa isii buusuun ni mala
Hiriira mormii Oromiyaa keessatti bal’inaan geggeeffamaa jiru irratti Oromoon 140 ajjeefamuu fi namoonni laakkofsi isaanii ammatti hin beekamne madaayuu Human Rights Watch (HRW) ifa godhe. Akka gabaasa HRW kanatti woranni mootummaan bobbaase ajjeesaa kan jiran ummata nagaa hiriira mormii irratti bobba’eedha.
Fincila ummataa baatii lamaa oliif guutuu Oromiyaa woliin gayaa jiru kana ukkaamsuudhaaf mootummaan hidhaa duuchaatti dhimma bayaa jira. Baqqalaa garbaa fi angawoota Kongiressi Federaala Oromoo (KFO) biraa sochii ummataa isaantu kakaase, ibiddas qabsiise jechuudhaan mana hidhaatti gate.
Mootummaan Itoophiyaa humnatti fayydamuudhaan mormitoota sochii dhabsiisuu fi ummanni gaafii qabu karaa seeraan akka hin dhiyeeffanne ukkaamsuu itti fufee jira. Adeemsi kuni, akka ibsa HRW kanatti, gara funduratti nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa kan sarara gadi lakkisiisuu fi biyyattii qilee buusuudha.
Dhaabbileen Oromoo fi jarmayaaleen mirga namaaf falman hiriira mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti gaaga’amni guddaan gayaa jira: heddutu ajjeeffame, baay’etu hidhame. Himannaa kallattii hedduun mootummaa biyyattii irratti dhiyaataa jiruuf mootummaan afaan isaa duuchuu filannoo godhatera. Kana dura, Geetaachoo Raddaa, ammatti waa’een baay’ina namoota ajjeefamanii haasawuun barbaachisaa miti jechuudhan gaafii dhiyateef tuffiin bira kutuun isaa ni yaadatama.
ajjeechaa oromoo irratti raawwatamu
Previous articleOromiyaan ammas dhiigdi, woraanaan jeeqamti
Next articleYuni. Haramaayaa fi Madda Walaabuutti 5 ajjeefaman; Jimmatti boombii brt. Oromoo irratti darbatameen 7 madaayan